Dreams Khabar ५० करोडको मुद्धा हाल्छु भनेकी राखीले तनुश्रीलाई किन हालिन २४ पैसाको मुद्धा ?
५० करोडको मुद्धा हाल्छु भनेकी राखीले तनुश्रीलाई किन हालिन २४ पैसाको मुद्धा ?
अभियानको कारण नै बलिउडमा यतिबेला बिवाद र सनसनीपुर्ण खुलासाले यतिबेला बजार तातेको छ । यही अभियानको दौरान नायिका तनु श्री दत्त र कन्ट्रोभर्सी क्वीन राखी सावन्तबीच बिवाद यति बिकराल बनेको छ कि उनीहरुको यो झगडा कानुनी झमेलामा समेत परिसकेको छ । तनुले राखीलाई कुनै क्लास नभएको भनेपछि सुरु भएको बिवादले यतिबेला तुन र राखीबीच तँतँ र ममको अवस्थामा आईपुगेको छ ।
राखीले तनुलाई ड्रग्स सेवनदेखि लिएर लेस्बियन भएको समेत आरोप लगाईन् यतिमात्र होईन उनले त तनुले आफनो बलात्कार गरेको समेत पत्रकार सम्मेलन गरेर बताईन् । राखीले भन्नु भनेपछि तनुश्रीले राखीमाथि मानहानीको मुद्धा दायर गर्दे १० करोड क्षतिपुर्तीका लागि आवदेन दिईन् ।
उता राखी पनि के कम उनले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै तनुले पनि आफुलाई क्लास नभएको भनेर बेइज्जत गरेको भन्दै ५० करोडको मानहानी मुद्धा दायर गर्ने बताएकी थिईन । तर राखीले हिजोमात्र तनुश्री बिरुद्ध मानहानीको मुद्धा दायर गरेकीछिन् त्यो पनि २५ पैसाको क्षतिपुर्ती माग गर्दे ।
उनले मुद्धा दायर गरेपछि सञ्चारकर्मीसंग बोल्दै भनिन् “तनुश्रीको औकात नै २५ पैसाको छ । त्यसैले तनुश्री तलाई मैले २५ पैसाको मानहानी मुद्धा लगाएको छु” । उनले अहिलेसम्म पनि तनु श्रीको तर्फबाट भने १० करोड क्षतिपुर्ती माग गर्दे दायर गरेको कानुनी नोटिस आफुलाई अहिलेसम्म नआएको बताएकीछिन् । अब हेरौँ उनीहरुको यो मुद्धाले पछिसम्म कस्तो रुप लिने हो ।
जवानी चल्यो जात चलेन, दलित भएकै कारण सुत्केरी श्रीमती छोडेर श्रीमान बेपत्ता
दोष कस्को ?
नि शुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
सवारी दुर्घटनामा २४ घाइते
मुग्लिन सडकखण्डमा दुर्घटना एकको मृत्यु
भरतपुर अस्पतालमा बिरामी कुरुवा घर बनाइने